Uzokhipha incwadi egeqa amagula ngoyise - Ilanga News
Home Izindaba Uzokhipha incwadi egeqa amagula ngoyise
UMalusi uthi uyise wabathwalisa ubunzima emndenini
UZOGEQA amagula encwadini ayibhalayo umculi we-gospel waseThekwini uMalusi Mbokazi, ngobuhlungu ababuthwa-liswe nguyise emndenini.
Phakathi kwezinto eziveza isihluku sikayise azozidalula kule ncwadi yisigameko lapho ethi uyise wadayisa ngomuzi behleli phakathi, kwaphoqa ukuba ba-phume bayohlala emjondolo.
UMalusi ozakhele udumo ecula neqembu Abanqobi kodwa osezimele, uthi ubone kungcono abhale le ncwadi aseyethe ngesihloko esithi “Great Pastor in Church and A Monster to His Family”.
ongumculi we-gospel odumile ubhala incwadi ngesihluku esenziwa nguyise emndenini wakhe.
Uthi nakuba esamxolela uyise ongasekho emhlabeni kodwa kuba-lulekile ukuba ashicilele le ncwadi ngenhloso yokuxwayisa abanye oyise bezingane ukuthi mabangenzi izinto ezihlukumeza izingane ngenxa yokuxabana kwabo nonina bazo.
Uthi uyise bekungumfundisi webandla elihlniphekile futhi engumuntu ohlonishwayo nasendaweni.
Utshele ILANGA LangeSonto ukuthi kule ncwadi uzogeqa amagula ngezenzo zikayise ebezishiya unina echiphiza mihla namalanga.
“Nakuba ngingakaze ngimbone [ubaba] embeka isandla [umama] kodwa kuningi abekwenza kumama obekumhlukumeza kakhulu njengoba kwesinye isikhathi ubeze ahambe ayokhala nakomakhelwane,” kusho uMalusi.
Uthi ubudlelwano bukayise nonina bugcine bufinyelela isigabeni sesa-hlukaniso ngenxa yobunzima besimo phakathi kwabo.
Ekhuluma naleli phephandaba, uthe nakuba engeke akudalule konke njengamanje okuqukethwe yile ncwadi kodwa ngeke asishiye nga-phandle isenzo esaba buhlungu kakhulu kunina nasezinganeni za-kwabo.
“Kwababuhlungu sihleli ekhaya nomndeni kungena abantu bezosi-khipha besitshela ukuthi umuzi engangiwazi njengowasekhaya usudayisiwe.
“Ngesikhathi befika okokuqala sakhala kwangenelela umphakathi wagcina ngokubaxosha. Kodwa sebebuya okwesibili yayingekho into esabe singayenza, saphoqeleka uku-ba siyoqasha kwenye indlu enginga-soze ngayikhohlwa,” kusho uMalusi ezwakala ukuthi kuvuka iminjunju uma ekhuluma ngaleso sehlakalo.
Uthi leyo ndlu yayincane kakhulu kunaleyo abese beyijwayele kanti kwakuthi uma liyidliva, kuphoqeleke ukuba balale bemile ngenxa yokuthi imvula yayingena ngaphakathi.
Nokho uthi usekwedlulisile okwenziwe nguyise njengoba asekubeke phambili manje wukunakekela unina.
UMalusi osanda kukhipha ingoma esihloko sithi, “Ngiphe Amandla” uthi njengamanje usebheke phambili empilweni njengoba esezinhlelweni zokukhipha i-albhamu ekupheleni kukaMandulo (September).
“Ngihlela ukuthi le albhamu ngiyethule kanye nale ncwadi ngoMfu-mfu (October) emcimbini omkhulu ozohlanganisa nabanye abaculi abehlukene,” kusho uMalusi.
Lo mculi ubonge ukwesekwa akutholile nge-albhamu yakhe yokuqala esihloko sithi “Ngisize Nkosi”.
Uthi wayengakulindele ukuthi uzokwesekwa ngale ndlela ekubeni wayephuma eqenjini ebelinedumela, Abanqobi.
Previous articleushekhinah uhlela imicimbi ezogqamisa igama lakhe
Next articleUSuthu luqinisa amabhawodi axegayo